Qalabka Kamaradaha La Socda Dhaqdhaqaaqa Oo Markii Ugu Horaysay Lagu Xidhay Madaarka Caalamiga Ah Ee Berbera | Araweelo News Network (Archive) -
Qalabka Kamaradaha La Socda Dhaqdhaqaaqa Oo Markii Ugu Horaysay Lagu Xidhay Madaarka Caalamiga Ah Ee Berbera
Berbera(ANN) Qalabka dhinaca amaanka loo adeegsado ee kamaraddaha la socda dhaqdhaqaaqa ayaa markii u horaysay taariikhda lagu xidhay Madaaraka caalamiga ah ee Magaalada Berbera. Munaasibad maanta oo Jimce ah lagu qabtay madaarka Berbera oo xadhiga lagaga jaray munaasibad loo qabtay
qalabka lagu soo kordhiyay madaarka oo lagu qabtay dhismaha garoonka waxa ka hadlay Wasiirka Wasaarada Duulista Hawada iyo Gaadiidka cirka Somaliland. Maxamuud Xaashi Cabdi, oo sheegay inay madaarka ku xidheen qalab casri ah oo wax ka taraya nabadgelyada, kaas oo ah kamarado la soconaya dhaqdhaqaaqa ah, isla markaana wax ka duubaya xarakaadka ka socda gudaha iyo dibada madaarka.
Wuxuuna xusay in madaarka Berbera ahmiyad weyn ugu fadhiyo dalka kana mid yahay madaarada ugu waaweyn qaarada Afrika. Sidaa awgeed ay lagama maarmaan tahay in dayactirkiisa iyo amaankiisaba waxbadan loo huro.
Wasiirku wuxuu u mahad celiyay dawlada Britain oo sida uu sheegay ugu deeqday qalabkan. Isagoo xusay in madaaradda Somaliland ay yihiin kuwo nabadgelyo ah oo beesha caalamku qirtay, isla markaana ka duwan yihiin madaarada Muqdisho, Boosaaso iyo Garoowe.
Sidoo kalena waxa uu xafladaa ka sheegay in qalabkaa oo kale lagu rikabayo madaarka Hargeysa. Si loo sugo amaanka madaarada dalka.
Munaasibada qalabka casriga ah ee dhinaca amaanka lagu xidhay madaarka waxa kaloo ka qaybgalay masuuliyiinta gobolka iyo magaalada berbera.
qalabkaas oo kale ayaa hore loogu xidhay Dekedda magaalada berbera, ka dib markii lagu rakibay kamarado meelo fog wax ka duubaya oo wax weyn ka taraya arrimaha amaanka ee Dekedda.